एउटा दृष्टिविहिनको सगरमाथा सपना....! [ भिडिओ ] - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
२०७७ माघ, १८ आइतवार
काठमाडौं / दृष्टिविहिन अमिट केसीले सगरभाथा आरोहण अभियान सफल पार्दैछन् । दृष्टि विहिन भएपनि दृढ ईच्छा शक्ति लिएर सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने सपलनालाई साकार बनाउन लामो समयदेखि लागि परेको उनले एक पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
उनल एडमण्ड हिलारीले शुरु गरेको सगरमाथा आरोहण सफलताको यात्रालाई पछ्याएको बताए । जसरी दुई हात नभएका नेपाली नागरिक सुदर्शन गौतमले सगरमाथा चढे त्यसरी नै आफूले पनि सफलता चुम्ने उनले विस्वास देखाए ।
बाग्लुङ जिल्ला जैमिनी नगरपालिका ४ निवासी अमिट केसी पूर्ण रुपमा दृष्टिविहिन छन् । पारिवारिक भरणपोषणकै भरमा रहेको उनी शिक्षक समेत थिए । उनले राहत दरबन्दी समेत त्यागेर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने साहस गरेको बताए ।
उक्र अभियानका लागि ७ वर्षदेखि लागि परेको बताए । यस अघि २०७२ बैशाख ८ गते सोलुखुम्वु जिल्लामा रहेको ६ हजार १ सय ८६ मिटर उचाइईको आइसल्याण्ड पिक र सोही वर्षको चैतमाम ६हजार ६ सय ५४ मिटर उचाईको मेरापिकसमेत सफल आरोहण गरिसकेका छन् । आफ्नो अभियानलाई सल्लाह सुझाव तथा सहयोग गरी आरोहण सफल बनाउन उनले अपिल समेत गरे ।
एउटा दृष्टिविहिनको सगरमाथा सपना भिडिओ
# दृष्टिविहिन # सगरमाथा
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम ‘काशी जानु कुत्तिको बाटो !’, रौँचिरा गनेर बस्ने होइन संयुक्त आन्दोलन गरौँ : नेता पौडेल
काठमाडौंको सडकमा प्रतिकात्मक शव र मलामीसहित महिला मार्चपास (भिडिओ)
पूर्वमन्त्री थापाले प्रचण्ड र नेपाललाई भने ‘कि फर्कनुपर्छ कि त नयाँ पार्टी खोल्नुपर्छ’, हेर्नुस् भिडिओमा
चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? यसो भन्छन् रघुविर महासेठ, शंकर भण्डारी र राजकिशोर यादव (भिडओसहित)
प्रतिनिधि सभाको विघटनको विरोधमा काँग्रेस : ‘जनताको जनमतलाई कुल्चेर जनप्रतिनिधि भइदैन कामरेड तानाशाह भइन्छ’ (भिडिओमा हेर्नुस्)